डा. कृष्ण पौडेलको समृद्धी अभियान – Rajdhani Daily
डा. कृष्ण पौडेलको समृद्धी अभियान
दुई नम्बर प्रदेशकै उत्कृष्ट यस उपमहानगरमा पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा पर्ने उपमहानगभित्र देशकै दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) निर्माणको प्रक्रियामा छ । तराई मधेस द्रुतमार्ग नजिकै रहेको उपमहानगरभित्रै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्दछ । चार तारे स्तरको होटल सञ्चालनले पनि यस उपमहानगरलाई अझ बढी सम्भावना बोकेको नगरको सूचिमा राखेको छ ।
जनसंख्याका आधारले मात्र उपमहानगर बनेको जिल्लाको जितपुरसिमरा उपमहानगरमा बिकास र प्रर्यटनका संभावना धेरै हुँदाहुँदै पनि सोचे जस्तो बिकासको अनुभव स्थानियले गर्न सकेका छैनन् । प्रशस्त प्रर्यटन बिकासका आधारहरु रहेको यस नगरमा सम्भावना धेरै भएपनि बिकासले फड्को मार्न नसकेकाले जीतपुरसिमरा उपमहानगर भित्रका नागरिक लामो समयदेखी निराश छन् ।
जनताको बिश्वास बटुल्न र जनचाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित मतदाताको घरघरमा पुग्नेमध्येका एक उम्मेदवार हुन् ४५ बर्षिय डा. कृष्ण पौडेल । सामाजिक र सहकारी अभियन्ताका रुपमा लामो समयदेखी सक्रिय रहेका डा. पौडेललाई नेकपा एमालेले उपमहानगरको प्रमुखको रुपमा अघि सारेको छ । सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय पौडेल उपमहानगरका जनताबिच निकै परिचित अनुहार हुन् । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा नेतृत्व गर्दै सफलता हात पारेका पौडेललाई एमालेले अघि सारेपछि नगरबासी यतिबेला खुशि देखिन्छन् ।
पार्टीले उम्मेदवार बनाएपछि पौडेल घरदैलोमा ब्यस्त छन् । मतदाताको घरघरमा पुग्दै पौडेलले अबका दिनमा निराश हुन नपर्ने र जनताको चाहना अनुसार नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाईरहेका छन् । सहकारीमा बिद्यावारिधि गरेका पौडेलले उपमहानगरभित्रको वर्तमान अवस्था र अबको दिनमा काम गर्ने योजनाको खाका तयार गरिसकेको बताउछन् । समृद्ध महानगर बनाउने योजनासहित उमहानगरको नेतृत्व गर्न अघि सरेको भन्दै पौडेलले अबको दिनमा जनताले निराश हुने अवस्था आउन नदिने बताउछन् ।
समृद्ध महानगरको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिएका पौडेलले काम गर्ने आफ्नो योजना समेत मतदातालाई जानकारी गराईरहेका छन् । तीन महिनाभित्र रणनीतिक लक्ष, मार्गचित्र, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, अल्पकालीन कार्ययोजना र आवधिक मूल्यांकनको आधारमा काम गर्ने पौडेलको लक्ष्य छ । उपमहानगरको सम्भावना र समस्याका बारेमा जानकार पौडेलले देशकै उत्कृष्ट उपमहानगर बनाउने सपना बोकेका छन् । ‘उत्कृष्ट उपमहानगर बनाउने र महानगरको आधार खडा गर्ने मेरो लक्ष्य हो’ पौडेलले भने ‘जनताको चाहना पनि मेरो जस्तै नै हो, त्यसैले यतिबेला सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ, जनताले साथ दिनुहुनेछ । ’
उपमहानगरकै ठुलो समस्याको रुपमा रहेको अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका पौडेलले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नका निम्ति प्लटिङ न्युनीकरण र कानूनको दायरामा ल्याउने बताएका छन् । ब्यवस्थित चक्रपथसहित उपमहानगरभित्र सबै स्थानमा सडकको सुविधा, गांउमा सामुदायिक भवन, क्लव, खेलमैदान, वाचनालय, व्यायामघर निर्माण गर्ने उनको सोच छ ।
साविकको गाविस पिपरासिमरा, भवानीपुरजितपुर, डुमरवाना, फत्तेपुर, छातापिप्रा, अमलेखगंज, इनर्वासिरा, रामनगर र रामपुरटोकनी समेटेर बनेको उपमहागर मध्यतराईको महत्वपूर्ण गन्तब्यका रुपमा हेरिएको छ । यस उपमहानगर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विविधतायुक्त स्थान, उच्च सामुदायिक चेतनास्तर रहेको भन्दै पौडेलले समृद्ध उपमहानगर बनाउने आफ्नो योजनामा सबैको साथ पाउने बताउछन् ।
को हुन् डा. पौडेल ?
जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्रमुखका रुपमा यतिबेला मतदातासामु आफ्नो योजना सुनाईरहेका डा. कृष्ण पौडेलको जन्म २०२९ सालमा भएको हो । रामप्रसाद पौडेल र विष्णुदेवी पौडेलको पहिलो सन्तानका रुपमा पौडेल मकवानपुरको न्युरेनी चिसापानीमा जन्मिएका हुन् । पांच दाजुभाई र दुई दिदीबहिनीमध्ये जेठा पौडेलको अहिले स्थायी बसोबास जीतपुरसिमरा उपमहानगर १५ मा रहेको छ ।